Arsenal oo guul raaxo leh ka soo heshay kooxda West Bromwich oo ay booqatay… +SAWIRRO – Gool FM
(England) 03 Jan 2021. Arsenal ayaa guul raaxo leh ka soo heshay kooxda West Bromwich oo ay ku booqatay garoonkeeda The Hawthorns, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-4, ciyaartan ayaana qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-2 ay ku hor kaceysay kooxda reer London ee Arsenal.
Daqiiqadii 23-aad Gunners ayaa hoggaanka u qabatay dheesha, waxaana 0-1 ka dhigay Kieran Tierney, iyadoo caawinta goolkan uu lahaa Rob Holding.
28 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kooxda Arsenal ayaa la timid goolkeeda labaad ee dheesha kaddib markii uu 0-2 ka dhigay da’ayarkooda Bukayo Saka, waxaana goolkan ka caawiyay Emile Smith-Rowe.
Daqiiqadii 60-aad Alexandre Lacazette ayaa u sii dheereeyay hoggaanka ciyaarta kooxdiisa Arsenal, wuxuuna dheesha ka dhigay 0-3.
64 daqiiqo markale Alexandre Lacazette ayaa niyadjabiyay xiddigaha kooxda West Bromwich, kaddib markii uu dheesha ka dhigay 0-4, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Kieran Tierney.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 0-4 oo ay Arsenal kaga soo adkaatay kooxda West Bromwich Albion oo ay ku booqatay garoonkeeda The Hawthorns, Gunners ayaa hadda fadhida booska 11-aad ee kala sareynta horyaalka Premier League.
Horudhac: Chelsea vs Manchester City… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya Stamford Bridge)